Ngaba kukhuselekile ukucima ifayile yeWindows EDB? - Iwindows
Eyona > Iwindows > Ukucinywa kweWindows edb-ireferensi ebanzi
Ukucinywa kweWindows edb-ireferensi ebanzi
Ngaba kukhuselekile ukucima ifayile yeWindows EDB?
Yikukhuselekile ukucimaiIWindows.edb. Kodwa emva kwakhocimayiyo,IWindowsizakuthatha ixesha ukuphinda isalathiso se-indexiifayilekwaye wakhe kwakhona isalathiso, ukuze uphando lwakho lube lucotha de lo msebenzi ugqitywe.15 ngoMeyi 2018
Molo, ndiza kukubonisa ukuba uzifumana njani iifolda ezinkulu kakhulu kwiWINDOWS. Yiya kwindlela yakho yokuqhuba yefayile, C: kwimeko yam. Ngoku jonga ubungakanani befolda nganye.
Iifayile zenkqubo (ii -apps ezingama-64) kunye neefayile zeNkqubo (x86) (ii -apps ezingama-32) aziyingxaki. Mhlawumbi unemidlalo kwezi folda zimbini = iifayile ezinkulu, unokucima imidlalo yakudala usebenzisa i-uninstaller okanye isoftware yeCCleaner. Ezi folda zimbini kulapho unazo zonke izixhobo zakho zenkqubo kunye nemidlalo, ngenxa yoko akumangalisi ukubona iifolda ezinkulu. (Iifayile zeNkqubo kunye neeFayile zeNkqubo x86) Ezi folda zimbini aziyongxaki, kodwa mhlawumbi ungacoca into nge-uninstaller (sisigqibo sakho) Ezinye iifolda zikwi-PC yam kuphela (i-pcsx2 yi-PS2 emulator / vstplugins are virtual music izixhobo njl) ...) Ifolda yeWINDOWS iqulethe iifayile zenkqubo yeWINDOWS, ke musa ukuyichukumisa. (I-15-20-25 GB) LE YIYO INGXAKI YOKUQALA: UMSEBENZI 'WABASEBENZISI' Kwincwadi eneenkcukacha 'yabasebenzisi' ungajonga ubungakanani beefolda.
Kwimeko yam ndinomsebenzisi omnye 'lok'. Kwifolda yam 'yomsebenzisi' lok ungakhangela zonke iifolda. Ifolda yomsebenzisi iqulethe ukhuphelo, amaxwebhu, amanqaku kunye neefayile ezifihliweyo.
Uninzi lweefolda zasekhaya ziqhelekile ngobukhulu. Mhlawumbi ifolda yokukhuphela inkulu. Jonga iifayile zakho ezikhutshelweyo, unokukwazi ukucima into.
ICEBISO: Ifolda yamaxwebhu inokuba neefayile zokujonga kuqala i-Adobe Premiere. Amaxwebhu -> Adobe -> iNkulumbuso pro ---> Inguqulelo yeAdobe-> (Uvavanyo lweAudio yeVidiyo kunye nokuVavanywa kuqala kweVidiyo) .Ungazicima iifolda zeProsesa yeAudio yeVidiyo kunye nokuBoniswa kweVidiyo KODWA EYONA BALULEKILEYO IBALULEKILEYO IIMFIHLO zeefayile ungaya 'ekuboneni' kwaye uphawule 'iifayile ezifihliweyo' okanye ungayenza isebenze kwiphaneli yokulawula.
Unokwenza iifayile ezifihliweyo kwifayile ekuphononongwa kuyo 'Jonga'. Ngoku ifolda entsha ivele 'i-AppData' le yincwadi efihliweyo. Ngoku makhe sijonge ubungakanani ... wow 51GB ... le fayile ifihliweyo inkulu kakhulu ... 'AppData' ihlala iqulethe iifolda ezi-3 kwaye ewe ..
I-Appdata iqulethe iifayile zedatha yesicelo, awunakucima zonke ezi folda njengoko ezi folda ziyafuneka kwisoftware ezininzi ezinje ngeChannel okanye ezinye. Kodwa ingxaki kwezi folda ziifayile ezigciniweyo ezinjengeefayile ze-Premiere cache okanye ii-backups ze-iOS. Unokuzihlalutya zonke ezi folda, kodwa qiniseka ukucima iifayile.
Jonga ubungakanani kwifolda nganye ukuhlalutya ukungangqinelani. Ifolda engaphezulu kwe-5GB inokuba yinto engathandekiyo, ndicinga ukuba le folda ineefayile ezinkulu yayiyigug endala eyalungiswa kulwakhiwo olutsha lweWindows kwaye ndicinga ukuba ungayicima ngokunqakraza ukucoca iyunithi yenkqubo. Cofa ekunene C / Properties / Jikelele / Ukucocwa kweDiski / Phawula iifayile zexeshana kwaye ubukele uKhuphelo.
Kodwa yimpazamo yakudala kuba andikaze ndiyibone kwakhona. Ezona folda zinengxaki ziifolda zeAdobe xa uzula - ziqhelekile. Ifolda eqhelekileyo iqulethe iifayile ezigciniweyo.
Ungayicima yonke incwadi eneenkcukacha, iya kuphinda yenziwe kwakhona ngeprojekthi entsha ye-Adobe Premiere. Kuya kufuneka usoloko ujonga le folda, mhlawumbi ikhona indlela yokucima iifayile ezigcinwe kwisoftware yeAdobe Premiere. Enye ingxaki kule folda ifihliweyo yinkqubo yokulondolozwa kwe-iOS.
Mhlawumbi ukhe wazama ukuhlangula ezinye iifayile zenkqubo ye-iOS ngesoftware yomntu wesithathu edibanisa yonke idatha yakho ye-iPhone okanye ye-iPad kwifolda yakho 'yeappdata'. Zikhangele ngokwakho zonke iifolda zakho ukuze ubone ubungakanani bokuchaneka kokugcina, ukuba awufuni i-backups ungazicima, kodwa ukuba ufuna ukugcina ulwazi lwakho unokukopa ezi fayile kwi-hard drive yangaphandle kwaye uzicime kwi-c drive yakho . Cola iifayile kulawulo olufanayo kwakhona ukuba ufuna ukubuyisela inkqubo ye-iOS okanye nantoni na.
Ngasekunene kwipropathi yomqhubi we-c unokuvula 'ukucocwa kweDiski' ukucoca iifayile zethutyana. Kwaye konke ... ukubulisa
Isebenziselwa ntoni iWindows EDB?
edbIngaba iIWindowsIsalathiso sedatha yokukhangela. Isalathiso sokukhangela sivumela abasebenzisi ukuba bakhangele ngokukhawuleza idatha kunye neefayile kwinkqubo yefayile ngenxa yesalathiso seefayile, ii-imeyile kwiifayile ze-PST kunye nomnye umxholo.Oktobha 19. 2020
Molo, ndinguCarrie Anne kwaye wamkelekile kwikhosi yekhompyuter yesayensi. Kwisiqendu sokugqibela, sakha i-ALU elula sisebenzisa amasango enengqondo enza izibalo kunye nokusebenza okunengqiqo, yiyo loo nto u-'A 'kunye no-'L'. Kodwa ke, akukho sizathu sokwenza ikhomputha kwisiphumo sokuyilahla kude- ube luncedo ngandlela thile ukugcina eli xabiso kwaye mhlawumbi wenze nemisebenzi eliqela ngokulandelelana.
Kulapho imemori yekhompyuter ingena khona! Embindini wephulo elide le-RPG kwikhonsoli yakho, okanye xa usenza inqanaba elinzima ngeMinesweeper kwidesktop yakho kwaye inja yakho ikhubekile, ikhubekile kwaye yakhupha intambo yombane eludongeni, uyayazi intlungu Ukuphulukana nayo yonke inkqubela yakho. Uvelwano. Kodwa isizathu sokuba uphulukane nayo kungenxa yokuba ikhonsoli yakho, ilaptop, kunye neekhompyuter zisebenzisa imemori yokufikelela ngokungacwangciswanga, okanye i-RAM, egcina izinto ezinje ngobume bomdlalo-okoko amandla evuliwe.
Olunye uhlobo lwenkumbulo ebizwa ngokuba yimemori engapheliyo inokuphila ngaphandle kwamandla kwaye isetyenziselwa izinto ezahlukeneyo; Siza kuthetha malunga nokuzingisa kwenkumbulo kwisiqendu esilandelayo. Namhlanje siqala ngokuncinci-ngokoqobo ngokwakha isekethe enokugcina ... inqaku elinye lolwazi.
Emva koko, siya kukala, kwaye sakhe imodyuli yethu yememori, kwaye siyakuyidibanisa ne-ALU yethu kwixesha elizayo xa ekugqibeleni sakha eyethu i-CPU! INTSHAYELELO Zonke iisekethe ezinengxoxo esele sithethe ngazo ukuza kuthi ga ngoku ziya kwicala elinye-zihlala zilulwelo-njengeyethu i-8-bit ripple adder ukusuka kwisiqendu sokugqibela. Kodwa sinokwenza iisekethe ezibuyela umva ngokwazo. Masizame ukuthatha isango eliqhelekileyo OKANYE isondlo kwaye sondle imveliso sibuyele kwenye yegalelo laso kwaye sibone ukuba kwenzeka ntoni.
Kuqala, masibekeni zombini igalelo ku-0. Ke u-0 OKANYE u-0 ngu-0, kwaye ke le setyhula ihlala ikhupha u-0.
Iqhezu lomzuzwana kamva, liphinda libuyele kwigalelo B ukuze isango OKANYE libone ukuba zombini igalelo ngoku ziyi-1,1 ziyi-OR 1 isengu-1 ngoko akukho lutshintsho kwimveliso. Ukuba sibuyisela umva ukufakwa ku-A sibuyele ku-0, isango OKANYE lisaza kuphuma 1. Ke ngoku sinesekethe esirekhodela u '1'.
Ngaphandle kokuba sibe nengxaki enye encinci-olu tshintsho luhlala luhleli! Nokuba sizama kangakanani, akukho ndlela esinokuthi ngayo esi siphaluka siphinde sibuyele umva ukusuka ku-1 siye ku-0. Ngoku makhe sijonge kwisekethe enye, kodwa nge-AND isango endaweni yoko. Siqala igalelo A no-B zombini ku-1,1 KUNYE 1 iziphumo 1 ngonaphakade.
Kodwa ukuba sijika igalelo A laya ku-0 kuba lisisi-AND sisango, iziphumo ziya ku-0. Ke le sekethe irekhoda u-0, isichasi sesinye isekethe. Njengangaphambili, nokuba yeyiphi igalelo esiyifaka kwigalelo A kamva, isekethe ihlala ikhupha u-0.
Ngoku sineesekethe ezinokurekhoda zombini ii-0s kunye nee-1s. Isitshixo sokwenza le nkumbulo iluncedo kukudibanisa iisekethe zethu ezimbini zibe yinto ebizwa ngokuba yi-AND-OR latch. Inamagalelo amabini, igalelo 'lokuseta' eliseta imveliso ibe li-1, kunye negalelo 'lokuseta kwakhona' eliseta imveliso ukuba ibe ngu-0.
Ukuba ukuseta kunye nokuseta kwakhona zombini ziyi-0, isekethe ikhupha kuphela oko kugqityiweyo ukungena. Ngamanye amagama, ikhumbula enye yolwazi! Imemori! Oku kwaziwa njenge 'latch' kuba inxulumene nexabiso elithile 'Latched' kwaye ihlala injalo. Isenzo sokufaka idatha kwimemori ibizwa ngokuba kukubhala, ngelixa ukufumana idatha kubizwa. kubizwa ngokuba kukufunda.
Kulungile, ke sinendlela yokugcina ulwazi oluncinci! Kakhulu! Ngelishwa, ukuba neengcingo ezimbini ezahlukeneyo zokufaka- ukuseta kunye nokuseta kwakhona kufuna umgca omnye ukufaka idatha kuyadideka singakuseta nokuba ku-0 okanye 1 ukugcina ixabiso. Sifuna kwakhona umgca oya kuvumela imemori ukuba ifumaneke yokubhala okanye 'itshixiwe' -into eyaziwa ngokuba ngumgca wokubhala onokubangela. Ngokudibanisa amasango ambalwa enengqondo sinokwakha isekethe ebizwa ngokuba yi-gated latch njengoko 'isango' linokuvulwa okanye livaliwe.
Ngoku le sekethe iba nzima kancinci. Asifuni ukuba sijongane nawo onke amasango asengqiqweni ... ke siza kongeza inqanaba lokuhamba kwesisu kwaye sibeke yonke imijikelezo yesekethe kwibhokisi enye-ibhokisi egcina kancinci.
Masivavanye icandelo lethu elitsha! Masiqale yonke into ngo-0.Ukuba sitshintsha umgca wedatha ukusuka ku-0 ukuya ku-1 okanye u-1 ukuya ku-0, akukho nto yenzekayo-iziphumo zihlala zingu-0.
Ke kufuneka 'sivule' isango 'ngokujika ubhalo lwenze ukuba ucingo lube li-1 Ngoku sinako a. beka 1 kumgca wedatha ukugcina ixabiso 1 kwi-latch yethu.
Qaphela indlela ekuyiyo umphumo ngoku 1. Impumelelo! Sinokuwucima umgca wokuvumela kwaye iziphumo ziya kuhlala zikwi-1. Kwakhona sinokutshintsha ixabiso kwilayini yedatha nantoni na esiyifunayo, kodwa imveliso iya kuhlala injalo.
Ixabiso ligcinwa kwimemori. Ngoku sitshintsha umgca wokuvumela ukuba uphinde ubuye. Sebenzisa umgca wedatha yethu ukuseta i-latch ku-0-iyasebenza! Ewe imemori yekhompyuter, egcina kuphela ulwazi oluncinci, ayiloncedo- ngokuqinisekileyo ayonelanga ukuqhuba uFrogger.
Okanye inyani. Kodwa asikhawulelwanga ekusebenziseni i-latch enye. Ukuba sibeka ii-latches ezi-8 ecaleni komnye, sinokugcina ii-8 bits zolwazi njengenani le-8-bit.
Iqela le-latches elenza oku libizwa njengerejista, eligcina inani elinye kunye nenani lamabhithi kwirejista ibizwa ngokuba bububanzi. Iikhompyuter zakuqala zazineerejista ezi-8, emva koko zine-16, 32, kwaye namhlanje iikhompyuter ezininzi zinerejista ezibanzi ezingama-64. Ukubhalela kwirejista yethu kufuneka kuqala sibe nazo zonke ii-latches, sinokukwenza oku ngocingo olunye oluqhagamshelwe kuwo onke amagalelo abo asibekele wona 1.
csrss.exe akukho nkcazo
Emva koko sithumela idatha yethu ngaphezulu kweengcingo zedatha ezi-8 kwaye emva koko sibekele ukubuyela ku-0, kwaye ixabiso elingu-8 ngoku ligcinwe kwimemori. Ukuseta ii-latches ecaleni komnye nomnye kusebenza kakuhle kwinani elincinci leebits. Irejista engama-64 iya kufuna iingcingo ezingama-64 ezikhokelela kwizikhonkwane zedatha kunye neengcingo ezingama-64 ezikhokelela kwiziphumo.
Ngethamsanqa sidinga kuphela ucingo oluyi-1 ukwenza zonke ii-latches zisebenze, kodwa zisengama-129 iingcingo. Ngama-bits angama-256 sineengcingo ezingama-513! Isisombululo yi-matrix! Kule matrix asihambelani r latches ngokulandelelana, sizibeka kwigridi. Ngama-bits angama-256 sifuna i-16 x 16 yegridi yamanqwanqwa enemigca eli-16 kunye neekholamu zeentambo.
Ukwenza i-latch isebenze kufuneka sivule umqolo ofanelekileyo KANYE nocingo lwekholamu, masisondeze kwaye ubone ukuba isebenza njani le nto, sifuna kuphela i-latch ekunqamleni kweentambo ezimbini ezisebenzayo ukuba zisebenze, kodwa zonke ezinye iiratshi kufuneka zingasebenzi Unokusebenzisa ukuthembela kwethu kunye nesango loku! I KUNYE nesango likhupha kuphela u-1 ukuba umqolo kunye nemigca yekholamu bobabini 1. Ke ngoko sinokusebenzisa lo mqondiso ukukhetha ngokukodwa i-latch enye. Lo mqolo / ukuseta ikholamu idibanisa zonke ii-latches zethu kwinto enye yokubhala eqhelekileyo eyenza ukuba ucingo lubekhona.
Ukuze i-latch ibhalelwe ukubhala, ucingo lomqolo, ucingo lwekholamu, kunye nocingo olubhaliweyo kufuneka zonke zibe yi-1.Okuya kuhlala kusebenza kwi-latch enye nangaliphi na ixesha, ucingo lwedatha. Kuba inye kuphela i-latch eyakha yabhalwa yenziwe ukuba isebenze, inye kuphela egcina idatha-zonke ezinye ii-latches ziya kuwutyeshela amaxabiso kumgca wedatha njengoko zingabhalwanga zikhuselekile.
Sinokusebenzisa ubuqhetseba obufanayo ngomgca wokuvumela ukufunda ukufunda idatha kamva ukufumana idatha kwi-latch ethile. Ngama-bits angama-256 eenkumbulo, oku kuthetha ukuba sidinga kuphela iingcingo ezingama-35-ucingo lwedatha e-1, ubhalo olu-1 lwenza ukuba ucingo lubekho, u-1 ufundele ukwenza ucingo, kunye nemiqolo eli-16 kunye neekholamu zokukhetha. Oko kusindisa ucingo oluninzi! Kodwa sifuna indlela yokucacisa ngokukodwa isixeko ngasinye esinqamlezayo apho unokufuna ukudibana nomntu kwi-12th Avenue kunye ne-8th Street - yile dilesi ichaza ukudibana.
I-latch esisindise kuyo nje inedilesi yomqolo we-12 kunye nekholamu 8. Kuba kukho ubuninzi be-16 inika imigca sigcina idilesi yomgca kwinani le-4-bit. I-12 ngu-1100 kwifom yokubini.
Sinokwenza okufanayo kwidilesi yekholamu: 8 ngu-1000 kwifom yokubini. Ke idilesi ye-latch ethile esisandula ukuyisebenzisa inokuba yi-11001000. Ukuguqula ukusuka kwidilesi ukuya kwinto ekhetha umqolo ochanekileyo okanye ikholamu, sidinga into eyodwa ebizwa ngokuba yi-multiplexer-icandelo lekhompyuter elinegama elihle elipholileyo, ubuncinci. xa kuthelekiswa ne-ALU.
Ii-Multiplexers ziza ngobukhulu obahlukeneyo, kodwa kuba sinemigca eli-16 sifuna i-1 ukuya kwi-16 ye-multiplexer. Isebenza ngolu hlobo: yinike inani elingu-4, kwaye idibanisa umgca wokufaka kumgca wokukhupha ohambelana nawo. Ke ukuba sidlula ku-0000, ikholamu yokuqala iya kukhethelwa thina.
Ukuba sidlula ku-0001 ikholamu elandelayo ikhethiwe njalo njalo. Sifuna ukuphindaphinda kwimigca yethu kunye nenye into ephindaphindayo kwiikholamu. Kulungile, iyanzima kwakhona, ke siyayenza inkumbulo yethu engama-256 lilungu layo.
Elinye inqanaba elitsha lokukhupha! Idilesi ye-8-bit yegalelo-ii-bits ezingama-4 kwikholamu kunye ne-4 kumqolo. Sifuna ukubhala kunye nokufunda okuvumela iingcingo. Kwaye okokugqibela, konke esikufunayo ngumgca wedatha omnye onokusetyenziselwa ukufunda okanye ukubhala idatha. Nokuba imemori engama-256-bit ayonelanga ukwenza okuninzi, ke kuyakufuneka silinganise nangakumbi! g ukubamisa ngokulandelelana.
Kanye nje ngeerejista. Senza uthotho lwee-8 zezi zinto sinako ukugcina inani le-8-bit-ekwabizwa ngokuba yi-byte. Ukwenza oku, sondla ngokuchanekileyo idilesi enye kuzo zonke i-8-bit yememori ye-256-bit ngexesha elinye, kwaye nganye nganye igcina inamba enye.
Oku kuthetha ukuba icandelo olenzileyo linokugcina ii-byte ezingama-256 kwii-256 iidilesi ezahlukeneyo. Shiya obu bunzima bangaphakathi ngasemva. Endaweni yokujonga oku njengothotho lweemodyuli zememori ezizodwa kunye nokujikeleza, masijonge njengebhanki emanyeneyo yememori enokuqwalaselwa.
Sineedilesi ezingama-256 kwaye kwidilesi nganye sinokufunda okanye sibhale ixabiso elingu-8-bit. Siza kusebenzisa eli candelo lememori kwisiqendu esilandelayo xa sakha i-CPU yethu. Indlela iikhompyuter zangoku ezikala ngayo kwii-megabyte kunye neegigabytes zememori, kukwenza into efanayo njengoko senzile apha-ukuqhubeka nokupakisha iinyanda ezincinci zeenkumbulo kuludwe olukhulu kunye olukhulu nolukhulu.
Njengoko inani leendawo zokugcina likhula, iidilesi zethu kuya kufuneka zikhule nazo. Iibhithi ezi-8 zinamanani aneleyo okubamba ii-byte ezingama-256 zeedilesi zethu zememori, kodwa kuphelele apho. Ukujongana ne-gigabyte- okanye ibhiliyoni yememori yenkumbulo- sidinga iidilesi ezingama-32 -Bit.
Ipropathi ebalulekileyo yenkumbulo kukuba sinokufikelela nakweyiphi na indawo yememori nangaliphi na ixesha nangocwangco. Kungenxa yoko le nto ibizwa ngokuba yiMemori yokuFikelela ngokuQhelekileyo okanye i-RAM. Xa usiva abantu bethetha malunga ne-RAM engakanani ikhompyuter- inkumbulo yekhompyuter leyo.
I-RAM ifana nexesha elifutshane lomntu okanye imemori yokusebenza, ukugcina umkhondo wento eyenzekayo-nokuba ngaba udle isidlo sasemini okanye uhlawule ityala lakho lefowuni. Nantsi intonga ye-RAM yokwenyani- eneemodyuli zememori ezi-8 ezithengiswe ebhodini. Ukuba sivula ngononophelo enye yezi modyuli kwaye sondeza, into yokuqala oza kuyibona zizikwere zememori ezingama-32.
Ukukhuphela i-oscdimg exe
Sondeza kwesinye sezikwere kwaye siyabona ukuba nganye yenziwe ngeebhloko ezine ezincinci. Ukuba sondeza kwakhona, siza kwimatriki yamabhithi athile. Le yi-matrix eyi-128 ngama-64.
Itotali iyonke zizigidi ezingama-8192. Isikwere ngasinye kwezi-32 zethu sineematriki ezi-4, yiyo loo nto ngamawaka angama-32, amawaka asixhenxe anamashumi amathandathu anesibhozo. Kwaye kukho izikwere ezingama-32 zizonke.
Ke konke konke malunga nesigidi esinye sememori kwi-chip nganye. Intonga yethu ye-RAM inezi-8 zezi chips, xa zizonke le RAM inokugcina iibhitithi ezizizigidi ezisi-8, ekwabizwa ngokuba yi-megabyte e-1. Ayisiyo nkumbulo ininzi kwezi ntsuku- le yimodyuli ye-RAM ukusukela ngo-1980.
Namhlanje ungathenga i-RAM enegigabyte okanye ngaphezulu kokugcina- ziibhiliyoni zeebte zokugcina. Ke namhlanje sakha iqhekeza le-SRAM-Imemori yokuFikelela ngokuQhelekileyo yokuFikelela- esebenzisa ii-latches. Kukho ezinye iintlobo ze-RAM ezinje nge-DRAM, imemori yeFlash, kunye ne-NVRAM.
Ezi ziyafana ngokufanayo ekusebenzeni kwazo kwi-SRAM, kodwa sebenzisa iisekethe ezahlukeneyo ukugcina iibits nganye- umzekelo ngamasango ahlukeneyo, ii-capacitors, ukurhola izicupho okanye iimemor. Kodwa ngokusisiseko zonke ezi teknoloji zigcina ulwazi kuludwe lweeseli zememori. Umsebenzi osisiseko ulula .. ngamanqanaba okutsala angaphaya kwamandla - njengonodoli waseRussia ogcina usiba mncinci kwaye uncipha.
uqhaqho exe temp
Ndiza kubona kwiveki ezayo, iikhredithi
Ndibunciphisa njani ubungakanani befayile yam yeWindows EDB?
Ukuze uyenze, qala uvule iPhaneli yoLawulo >> Izinketho zesalathiso >> Phambili >> cofa = Yakha kwakhona (ukuvula le bhokisi yencoko yababini, sebenzisa lo myalelo ulandelayo: Lawula srchadmin. Dll). Kwimizuzu nje embalwa, iIWindowsUkukhangela kuya kugcwalisa i-reindex epheleleyo yedatha kwi-drive drive. Oku kuyakwenzaukunciphisaiubungakananiyeedb ifayile.Oktobha 25 2020
Ndiyicima njani indawo yokukhangela yeWindows?
Uneendlela ezimbini zokwenzacimaiIsalathiso sokuKhangela yeWindowsifayile: ngukuyacimaicacisa gca kwiFayile Explorer, okanye ngokusebenzisa i-Indexing yeenketho 'zeenketho eziphambili' zencoko yababini yokwakhaisalathiso, ethi icime kuqala ifayile esele ikho ngaphambi kokuba iphinde iyakhe.
Uyisusa njani ifayile yeWindows.edb Windows 10?
Susa iWindowsWindows.edb? # 1) Khangela 'iinketho zesalathiso' (phantsi kwe 'Useto'). Yivule. 2) Khangela 'iinkonzo' (okanye usebenzise 'services.msc') kwaye ufumane 'uPhendlo lweWindows'. Misa inkonzo. 3) Cima ifayile yeWindows.edb
Ngaba kukhuselekile ukucima imbali yeWindows.edb?
IWindows.edb yimbali yophando lwakho kunye neerekhodi ezivela kwisalathiso sedrive yakho & amp; iifayile. Awudingi kwenza nto ukuba ucimile kwisalathiso & amp; Uphendlo lweWindows. Ukuba awuxhomekekanga kwindlela osebenzisa ngayo windows ukukhangela. Kukhuselekile nge-100% ukuyicima kodwa ukuba uyayisebenzisa? IiWindows ziya kudinga ukuqala ngaphezulu kwesalathiso kunye
Ndingayitshintsha njani indawo yefayile ye-EDB?
Vula iiNkonzo.msc kwaye uzulazule kwinkonzo yoPhando lweWindows. Cofa kabini kwiWindows Search service ukuvula ibhokisi yencoko yababini. Khetha Yeka inkonzo. Yiya kwifolda yeWindows.edbfile kwaye uyicime. Inketho 3: Guqula indawo ekuyo ifayile yeWindows.edb Index. Vula iPaneli yokuLawula. Khetha iinketho zesalathiso. Cofa phambili. Yiya kwindawo yesalathiso kwaye ukhethe eNtsha.
Ithetha ntoni iWindows.edb kwiinjini yokukhangela?
IWindows.edb yifayile yedatha yeeNkonzo zokuKhangela yeWindows, enikezela ngeziphumo zokukhangela iifayile, umxholo, kunye nokugcina ipropathi emva kokufakwa kwisalathiso. IWindows.edb inokuqunjelwa yiNkonzo yokuKhangela yeWindows emva kwexesha elithile.